Linksys RE6300 / RE6400 User Guide - Boky Torolàlana +
Linksys RE6300 / RE6400 Torolàlana ho an'ny mpampiasa
Posted byAdmin Febroary 21, 2019 Leave a comment ao amin'ny Torolàlana ho an'ny mpampiasa Linksys RE6300 / RE6400
Home » Linksys » Linksys RE6300 / RE6400 Torolàlana ho an'ny mpampiasa
1.1 Boky Torolàlana mifandraika
Ity Torolàlana ho an'ny mpampiasa ity dia afaka manampy anao hampifandray ilay extender amin'ny tamba-jotra ary hamaha ireo olana iraisana iraisana. Afaka mahita fanampiana bebe kokoa ianao avy amin'ny fanohananay mpanjifa 24/7 nahazo loka tamin'ny Linksys.com/support.
Ny jiro eo alohan'ilay extender range dia manome fampahalalana momba ny hery, fanavaozana ary ny tanjaka famantarana.
Power Switch fotsiny ny kinova Eoropeana.
Button sy fametrahana Wi-Fi voaaro Wi-Fi Ampiasao ny fametrahana Wi-Fi Protected Setup raha te hampiditra fitaovana tsy misy tariby mifanentana amin'ny tambajotrao. Jereo ny fampiasana Wi-Fi Protected Setup eo amin'ny pejy faha-7.
Avereno ny gazety Press ary tazomy mandritra ny dimy segondra mba hamerenanao ireo hadisoan'ny orinasa. Azonao atao ihany koa ny mamerina ny lafaoro avy amin'ny Administration> Screen Default Factory amin'ny alàlan'ny fampitaovana misy an'ny Browser-monina.
Ethernet (manga) Mampifandray fitaovana tariby amin'ny tamba-jotra tsy misy tariby misy tariby Ethernet (tamba-jotra). Ny jiro maintso dia mirehitra rehefa misy fitaovana Ethernet mifandray sy miasa amin'ity seranana ity. Manjelanjelatra ny jiro rehefa mandefa na mandray angon-drakitra amin'ny seranan-tsambo Ethernet ny extender.
Ahoana ny fametrahana ny extender range
Alohan'ny hametrahana azy, esory na esory ireo mpampivelatra elanelam-potoana ao amin'ilay tambajotra.
1. Ampidiro ny elanelam-potoana manitatra eo anelanelan'ny router sy ny faritra tsy misy Wi-Fi.
Hamarino tsara fa manana ny 50% farafahakelin'ny famantarana ny Wi-Fi an'ny router ianao amin'izay fotoana izay amin'ny fitaovana hampiasanao amin'ny fametrahana azy. Ny rindrambaiko fananganana dia hanampy anao hahita ny toerana tsara indrindra raha manana olana ianao.
2. Miandrasa jiro matanjaka eo amin'ny fonon'ny extender range. Mety maharitra roa minitra. Amin'ny solosaina, telefaona na takelaka, mifandraisa amin'ireo tambajotra Wi-Fi ”Linksys Extender Setup”
3.Raha tsy mandeha ho azy ny fananganana dia sokafy ny Browser mankany amin'ny http://extender.linksys.com.
Ny teknolojian'ny finday an'i Linksys dia hanampy anao hahita ny toerana mety ho an'ny extender range anao raha manana olana ianao. Hotarihina ianao hametraka ny elanelam-potoana misy extender akaiky kokoa avy amin'ny router anao hanatsarana ny signal. Raha nofantsihinao tamin'ny fametrahanao voalohany dia tsy hahita ny efijery Spot finder ianao.
4. Mandritra ny fametrahana dia hanontaniana ianao raha tianao ny hanavao ny azy ho azy ny elanelam-potoana. Raha mamela fanavaozana mandeha ho azy ianao dia hampidina sy hametraka fanavaozam-baovao ny mpanitatra isan-karazany rehefa avoakan'i Linksys. Ny fanavaozana mandeha ho azy dia hitranga mandritra ny alina ka tsy hanelingelina ny hetsika ataon'ny tambajotra.
Azonao atao ihany koa ny manapa-kevitra ny hanavao ny tanana ny extender range araka izay mahamety anao.
Manorata eto koa ny fihetsika LED napetraka ary ao amin'ny QSG
Azonao atao koa ny mampifandray ilay extender range amin'ny alàlan'ny fampiasana Wi-Fi Protected Setup. Ho an'ny bebe kokoa
jereo ny fampahalalana ”Mampiasà Wi-Fi Protected Set” eo amin'ny pejy 7
Endri-javatra manokana - Music Streaming
Playback Wireless Music
Mampandeha mozika amin'ny alalàn'ny extender AC1200 MAX anao amin'ireo mpandahateny mifandray.
? Ampifandraiso amin'ny tambajotra Wi-Fi iray ihany ny fitaovana iOS amin'ny extender range anao.
? Atsofohy avy eo ambanin'ny efijery misy anao.
? Kitiho ny Linksys Range Extender.
Ho an'ny Samsung Galaxy
? Ampifandraiso amin'ny tambajotra Wi-Fi mitovy amin'ny extender range anao ny fitaovana Galaxy.
? Safidio ny mozika fampiharana
? Safidio ny rakitra mozika ary kitiho ny kisary Screen Mirroring
? Misafidiana Linksys Range Extender.
Mety ho hafa ny fijerin'ny efijery anao, arakaraka ny maodelin'ny fitaovanao sy ny kinovan'ny Android.
Ho an'ny fitaovana Android hafa, alefaso mozika miaraka amin'ny MediaHouse, UPnPlay, Skifita, ArkMC,
BubbleUPnP, Pixel Media, ary 2Player 2.0.
? Sokafy Windows Media Player
? Kitiho havanana amin'ny rakitra mozika ary safidio Linksys Range Extender.
Ity lisitry ny mpilalao haino aman-jery tohana ity dia azo ovaina amin'ny famoahana vaovao
rindrambaiko na fampiharana finday.
? Ireo mpampiasa Windows dia afaka mandefa mozika amin'ny Windows Media Player12.
? Ireo mpampiasa Mac dia afaka mandefa mozika amin'ny alàlan'ny rindrambaiko manana na ny app sofaPlay ..
? Ireo mpampiasa Android dia afaka mandefa mozika amin'ny MediaHouse, UPnPlay, Skifita, ArkMC, BubbleUPnP, Pixel Media, ary 2Player 2.0.
? Ny fitaovana IOS ao anatin'izany ny iPhone, iPad na iPod dia afaka mandefa mozika miaraka amin'ny rindrambaiko tompona na fampiharana hafa toa ny,, ArkMC, Smartstor Fusion,, Mconnect, ary DK UPnP / DLNA.
? Ny extender dia manohana endrika rakitra MP3, FLAC, WAV, WMA ary AAC, raha toa ka tohanana amin'ny alàlan'ny fitaovana sy ny fampiharana manao streaming ny format.
? Ny seranana stereo 3.5mm dia manohana ny sofina sy ny mpandahateny mandeha amin'ny herinaratra.
Ahoana ny fahazoana miditra amin'ny fitaovan'ny mpiorina
Rehefa avy nanangana ny Extender Ampiasao ny fitaovana Exterder Browser miorina amin'ny fanovana ny toerana misy anao.
Amin'ny solosaina na fitaovana mifandray amin'ny extender range anao, sokafy ny browser rehetra (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, sns.), Ary ampidiro extender. linksys.com ao amin'ny bara adiresy.
Hasaina hiditra amin'ny anaran'ny mpampiasa sy ny teny miafinao ianao. Raha tsy nanova azy ireo ianao nandritra ny fametrahana dia avelao ho banga ny anaran'ny mpampiasa ary ampidiro ny "admin" ao amin'ny sahan-teny miafina. Raha namboarinao ny SSID sy ny teny miafinao dia ampidiro ireo mari-pahaizana ireo.
Raha mifandray amin'ny tamba-jotra eo an-toerana ianao, fa tsy mankany amin'ny extender range, dia mila miditra amin'ny adiresy IP an'ny extender ianao ao amin'ny fizahana raha te-hiditra amin'ireo toe-javatra fanitarana.
1. Alefaso ny UPnP:
a) Kitiho ny Start, Control Panel, Add or Delete Program, avy eo tsindrio Add / Delete Windows Components.
b) Safidio ny Serivisy Network, avy eo kitiho ny antsipiriany.
c) Safidio ny interface UPnP User Interface, avy eo tsindrio OK.
2. Sokafy ny Windows Explorer. Tsindrio ny My Network Places eo amin'ny tontonana ankavia.
3. Tadiavo ny kisary RE6700 eo amin'ny tontonana ankavanana. (Mety takiana aminao ny manova ny firewall raha mila torolalana.)
Windows 8, Windows 7, na Vista:
1. Sokafy ny Windows Explorer (File Explorer ao amin'ny Windows 8). Tsindrio Network. Tadiavo ny kisary RE6700 eo amin'ny tontonana ankavanana. (Mety takiana aminao ny manova ny fikirana firewall hahafahanao mampiseho ny solosaina tambajotra. Jereo ny fanampiana ny rafitry ny rafitra misy anao raha mila torolalana.
2. Kitiho havanana ny kisary RE6700. Tsindrio Properties. Tsindrio ny rohy adiresy ao amin'ny pejin-tranonkala Device.
1. Sokafy Safari. Hamarino tsara fa tafiditra ao amin'ny menio Bookmarks sy Favorites bar.a. Bonjour. Mandehana any amin'ny safidin'i Safari> Advanced ary alao antoka fa voafantina ny boaty Bonjour tsirairay.
2. Mitadiava Bonjour ao amin'ny menio Bookmarks na bara Favorite ary safidio Linksys Extender Raha nanova ny anaran'ny tambajotra sy ny teny miafinao ianao dia safidio ny tamba-jotra
anarana ary ampidiro ny teny miafina noforoninao.
Mampiasa ny fikirakirana extender
Kitiho ny fanampiana eo amin'ny ilany ankavanan'ny efijery raha mila fampahalalana fanampiny momba ireo safidin'ny efijery. Ny fiovana amin'ny fanovana dia tsy hahomby raha tsy tsindrio ny Save amin'ny faran'ny efijery. Azonao atao koa ny manindry ny hanafoana ny fanovana rehetra.
Mampiasa Wi-Fi Protected Setup
Ny Wi-Fi Protected Setup dia manamora ny fampifandraisana ny Extender amin'ny tamba-jotra ary mampifandray ireo fitaovana hafa amin'ny tamba-jotra amin'ny alàlan'ny extender.
Hetsika hazavana Wi-Fi Protected Setup
Mampifandray ilay extender amin'ny fidirana fidirana efa misy
Raha manohana azy ny fidirana na ny router anao dia azonao atao ny mampiasa Wi-Fi Protected Setup hampifandray ny extender range amin'ny fidirana na ny router. Midira ao amin'ny tranokala miorina amin'ny tranokala ary tsindrio WPS ao amin'ny bara fitetezana havia. Misafidiana amin'ireo fomba fanamboarana eto ambany hampifandray ilay extender.
Raha manana teboka fidirana na router ianao izay tsy manohana ny fametrahana Wi-Fi Protected Setup, mariho ireo fikirakirana tsy misy tariby ary avy eo amboary amin'ny tanana ny extender.
Mifandray amin'ny bokotra fananganana Wi-Fi Protected
Ampiasao ity fomba ity raha toa ka manana bokotra Wi-Fi Protected Setup ny router na ny point fidirana
1. Tsindrio ny bokotra Wi-Fi Protected Setup amin'ny extender. Raha manana router dual-band ianao dia hataonao indray izao hanitarana ny tambajotra faharoa. Hanitatra aloha ny tarika 2.4 GHz.
2. Kitiho ny Burton Wi-Fi Protected Setup Burton ao amin'ny efijery Fiarovana Wi-Fi Protected Setup (raha misy), NA tsindrio ary tazomy ny bokotra Wi-Fi Protected Setup amin'ny router mandritra ny iray segondra. Rehefa vita ny fifandraisana, ho mafy ny jiro Wi-Fi Protected Setup amin'ny extender.
3. Raha mampiasa ny efijery Wi-Fi Protected Setup an'ny Extender ianao dia tsindrio OK ao amin'ilay efijery ao anatin'ny roa minitra.
Azonao atao ihany koa ny miditra amin'ny WPS ao amin'ny rindrambaiko miorina amin'ny tranokala amin'ny alàlan'ny fipihana WPS amin'ny bara fitetezana ankavia.
Mifandray amin'ny PIN Extender Range
Ny PIN Wi-Fi Protected Setup PIN (Personal Identification Number) dia hita ao amin'ny marika misy ny vokatra ao ambadiky ny Extender, azonao atao ny mampiasa ny fomba, raha toa ka tsy misy menio Wi-Fi Protected Setup.
1. Ampidiro ao anaty saha sahaza azy ny efijery Exterder ao amin'ny efijery fanamboarana Wi-Fi Protected Set Router. Kitiho ny fisoratana anarana. Rehefa vita ny fifandraisana, ho mafy ny jiro Wi-Fi Protected Setup amin'ny extender.
2. Kitiho OK.
Mampifandray ireo fitaovana amin'ny tamba-jotra amin'ny alàlan'ny extender
Misafidiana amin'ireo fomba etsy ambany hampifandray ireo fitaovana izay manohana ny fametrahana Wi-Fi Protected Setup amin'ny tambajotrao. Delete ny efijery etsy ambany
Avereno ny torolàlana ho an'ny fitaovan'ny mpanjifa tsirairay izay manohana ny fametrahana Wi-Fi Protected.
Ampiasao ity fomba ity raha toa ka manana bokotra Wi-Fi Protected Setup ny fitaovana ampiasain'ny mpanjifanao.
1. Tsindrio ny bokotra Wi-Fi Protected Setup amin'ny fitaovana client.
2. Kitiho ny bokotra Wi-Fi Protected Setup eo amin'ny efijery fananganana Wi-Fi Protected Setup, NA tsindrio ary tazomy ny bokotra Wi-Fi Protected Setup eo amin'ny sisin'ny extender mandritra ny iray segondra. Rehefa vita ny fifandraisana, ho mafy ny jiro Wi-Fi Protected Setup amin'ny extender.
3. Raha mampiasa ny efijery Extender Wi-Fi Protected Setup dia ataovy izay hahazoana antoka fa tsindrio OK ao anatin'ny roa minitra na tsy maintsy manomboka indray ianao.
Mifandray amin'ny PIN an'ny mpanjifa
Ampiasao ity fomba ity raha manana PIN Wi-Fi Protected Setup (nomeraon'ny famantarana manokana) ny fitaovan'ny mpanjifanao.
1. Ampidiro ny PIN amin'ny Device ary asehoy amin'ny efijery Extender Wi -Fi Protected Setup.
2. Kitiho ny fisoratana anarana amin'ny efijery Extender Wi-Fi Protected Setup. Rehefa vita ny fifandraisana, ho mafy ny jiro Wi-Fi Protected Setup amin'ny extender.
3. Tsindrio OK eo amin'ny efijery Extender Wi-Fi Protected Setup ao anatin'ny roa minitra raha tsy izany dia tsy maintsy manomboka indray ianao.
Mifandray amin'ny PIN Extender
Ampiasao ity Fomba ity raha mangataka ny Extender PIN ny fitaovan'ny mpanjifanao.
1. Ao amin'ny Client Device ampidiro ny PIN, Voatanisa ao amin'ny efijery Extender Wi-Fi Protected Setup. (Voasoratra ao amin'ny mari-pamantarana vokatra ao ambadiky ny extender ihany koa izy io.) Rehefa vita ny fifandraisana, ho mafy ny jiro Wi-Fi Protected Setup amin'ny extender.
2. Tsindrio OK eo amin'ny efijery Extender Wi-Fi Protected Setup ao anatin'ny roa minitra.
Ahoana ny fampiasana ny fanadihadiana amin'ny tranokala
Site Survey dia manome sarin'ireo teboka fidirana mpifanila vodirindrina sy router tsy misy tariby ao anatin'ny extender.
Hanokatra ny pejy Survey Survey:
1. Midira amin'ny browser- based Utility jereo (Ahoana ny fidirana amin'ny Browser ao amin'ny pejy 5).
2. Kitiho ny kiheba Wireless. Kitiho ny pejy momba ny Site Survey.
3. Safidio? Raha hifandray amin'ny tamba-jotra tsy misy tariby, kitiho ny bokotra eo akaikin'ny anaran'ny tamba-jotra tsy misy tariby (SSID) ao amin'ny tsanganana Select, ary kitiho ny Connect.
4. SSID? Mampiseho ny anaran'ny tambajotra tsy misy tariby eo akaiky eo.
5. GHz? Mampiseho ny tarika onjam-peo (amin'ny GHz) an'ireo tambajotra tsy misy mpifanila vodirindrina aminy
6. Hatanjaka famantarana? Mampiseho ny toerana misy ny teboka fidirana amin'ny mpifanila vodirindrina aminy amin'ny alàlan'ny fanondroana ny herin'ny signal tsy misy tariby: dot ihany = 25%, teboka + iray
onja = 50%, teboka + onja roa = 75%, teboka + onja telo = 100%. Raha tsy aseho ny onja, ny extender anao dia lavitra loatra ny toerana fidirana ambony na voasakana ny signal. Miezaha hihazona ny tanjaky ny signal eo anelanelan'ny 60% sy 100% ho an'ny fampisehoana optimum.
7. Fiarovana? Mampiseho ny fomba fiarovana ampiasain'ny AP mifanila aminy. Raha misy tambajotra manohana ny fametrahana Wi-Fi Protected, dia aseho koa ny kisary Wi-Fi Protected Setup.
Raha te hampifandray ny extender anao amin'ny teboka fidirana na ny router amin'ny Site Survey dia mila fantatrao ny teny miafina na ny passphrase an'ny tambajotra ao amin'io fitaovana io.
1. Safidio ny anaran'ny tamba-jotra (SSID) izay tianao hamerina amin'ny extender anao amin'ny fipihana ny bokotra mifanentana ao amin'ny tsanganana Select.
2. Kitiho ny Connect. Rehefa entina dia ampidiro ny teny miafina na ny passphrase ampiasaina hiarovana ny tamba-jotra tsy misy tariby. Ny karazana fampahalalana momba ny fiarovana takiana amin'ity takelaka ity dia mila ny fahazoana miditra.
TIP: Ho an'ny tambajotra misy tarika roa, alao antoka fa hifandray amin'ny tarika roa ianao, 2.4 GHz ary 5 GHz.
3. Kitiho ny Save. Tokony hamboarina ny masontsivana mpampitohy anao. Hiverina indray ny interface Wireless, ary ny extender dia hifandray amin'ny fidirana na ny router nisafidy anao.
Cross-Band dia ny fampiasana ny tarika roa tonta ho an'ny famindrana angona haingam-pandeha sy ny streaming ary ny lalao tsy tapaka.
NAOTY Ny RE6700 dia miasa amin'ny tambajotra 2.4GHz sy 5 GHz.
Tsy azonao atao ny mampifandray ilay extender
Zahao ny toerana misy ny router sy ny extender
? Ho an'ny fametrahana voalohany dia mety mila apetrakao akaikin'ny router ny extender. aorian'ny fametrahana ny extender anao dia azonao esorina izany ary esorinao hiala amin'ny toerana farany.
? Mba hampihenana ny fanakanana ny signal, manandrama toerana hafa ho an'ny router sy ny extender.
? Aza atao mametraka ny router ary manitatra eo akaikin'ny zavatra vy, rindrin'ny rindrina ary ny faritra taratra toy ny fitaratra na fitaratra.
? Aza atao mametraka ny router ary manitatra eo akaikin'ny elektronika hafa mety hiteraka fahatapahan'ny famantarana.
Raha mampiasa Wi-Fi Protected Setup ianao hifandray, miandrasa mandra-piarovan'ny Wi-Fi Protected
Mijanona tsy mipetaka ny famantarana ny fanomanana alohan'ny hanandramanao hanao ny fifandraisana indray.
Tsy azonao atao ny miditra amin'ny extender range anao Mba hidirana amin'ny extender range anao dia tokony hifandray amin'ny tamba-jotra anao ianao. Raha manana Internet tsy misy tariby ianao izao, ny olana dia mety tsy nifandray tamina tambajotra tsy misy tariby hafa ianao.
Ho an'ny Mac Instruction dia jereo ny fizarana MAC.
Mba hamahana ny olana amin'ny solosaina Windows:
1. Ao amin'ny biraonao Windows, kitiho havanana ny kisary tsy misy tariby ao anaty fitoeram-bolan'ny rafitra. Mety tsy hitovy ny endrik'ilay kisary arakaraka ny kinovan'ny Windows ampiasanao.
2. Kitiho ny View Wireless Networks.
3. Safidio ny anaran'ny tamba-jotra. Tsindrio Connect. Ao amin'ny ohatra etsy ambany, ny solosaina dia nifandray tamina tambajotra tsy misy tariby antsoina hoe JimsRouter. Ny anaran'ny tambajotra marina, BronzeEagle amin'ity ohatra ity dia voafantina.
4. Raha asaina hiditra lakilen'ny tamba-jotra ianao dia soraty ao anaty ny lakilen'ny Network ny tenimiafinao (Security Key) ary hamafiso ireo sahan-kevitry ny tambajotra. Tsindrio Connect. Tokony ho afaka hiditra amin'ny fampiasana ny Range Extender Browser ianao.
Mba hamahana ny olana amin'ny solosaina Mac:
1. Ao amin'ny tsipika menio manerana ny tampon'ny efijery, kitiho ny sary famantarana Wi-Fi. Linksys Connect dia nanendry anarana manokana ny tamba-jotra. Ao amin'ny ohatra etsy ambany, ny solosaina dia nifandray tamina tambajotra tsy misy tariby antsoina hoe JimsRouter. Ny anaran'ny tamba-jotra E-Series Linksys, BronzeEagle amin'ity ohatra ity dia voafantina.
2. Safidio ny anaran'ny tamba-jotra tsy misy tariby an'ny router tianao ampifandraisina.
3. Soraty ao amin'ny sehatry ny Password ny teny miafin'ny tamba-jotra (Security Key). Tsindrio OK.
Tokony ho afaka hiditra amin'izao fotoana izao ny fampiasana Extender Browser miorina amin'ny browser.
Manana olana amin'ny fifandraisana tsy tapaka ianao
Ampidiro ny elanelam-potoana manitatra eo anelanelan'ny router sy ny faritra tsy misy Wi-Fi. Hamarino tsara fa manana farafahakeliny 50% amin'ny famantarana ny Router Wi-Fi anao amin'io fotoana io amin'ilay fitaovana nampiasanao tamin'ny fametrahana azy.
Model Model Linksys RE6300 / RE6400
Famaritana modely Dual-band Wireless-AC Range Extender
Model Number RE6300 / RE6400
Fenitra IEEE 802.11ac, 802.11a, 802.11n, 802.11g,
Seranana Gigabit Ethernet, audio
(Modely eropeana ihany)
Fametrahana LEDs Power / Wi-Fi Protected, Ethernet (rohy,
Antenna 2 ivelany (tsy azo esorina)
Wi-Fi fiarovana tsy misy tariby
Security Key Bits hatramin'ny encryption 128-bit
Refy 2.64 ???? 1.49 ???? 4.13 ???? 67 x 38 x 105 mm)
Milanja 5.12 Oz (145 g)
Hery 12VDC / 1.0A
FCC fanamarinana, ICES-003, RSS210, CE, Wi-Fi
Suhu miasa 32 hatramin'ny 104 ° F (0 hatramin'ny 40 ° C)
Temperature fitehirizana -4 ka hatramin'ny 140 ° F (-20 hatramin'ny 60 ° C)
Fahalemem-piasana 10 ka hatramin'ny 80% noncondensing
Humidity fitehirizana 5 ka hatramin'ny 90% noncondensing
Ireo famaritana dia azo ovana tsy misy fampandrenesana.
Tsidiho ny linksys.com/support hahazoana fanohanana ara-teknika 24/7 nahazo loka
BELKIN, LINKSYS ary anaran'ny vokatra sy logo maro dia marika famantarana ny vondron'orinasa Belkin. Marika amin'ny antoko fahatelo voalaza ny fananan'ny tompony avy. Ny lisansa sy ny fanamarihana ho an'ny rindrambaiko an'ny antoko fahatelo ampiasaina amin'ity vokatra ity dia azo jerena eto: http://support.linksys.com/en-us/license. Mifandraisa azafady
© 2015 Belkin International, Inc. ary / na ireo mpiara-miasa aminy. Zo rehetra voatokana.
Fanambarana momba ny fitsabahan'ny Komisiona federaly
Ity fitaovana ity dia manaraka ny Fizarana 15 amin'ny FCC Rules. Ny fiasa dia iharan'ireto fepetra roa manaraka ireto: (1) Ity fitaovana ity dia mety tsy hiteraka fanelingelenana manimba, ary (2) ity fitaovana ity dia tsy maintsy manaiky ny fanelingelenana voaray, ao anatin'izany ny fanelingelenana mety hiteraka fiasa tsy tiana.
Ity fitaovana ity dia notsapaina ary hita fa manaraka ny fetran'ny fitaovana nomerika ao amin'ny Class B, mifanaraka amin'ny Fizarana 15 amin'ny Fitsipika FCC. Ireo fetra ireo dia natao hanomezana fiarovana azo antoka amin'ny fanelingelenana manimba amin'ny fametrahana trano fonenana. Io fitaovana io dia miteraka, mampiasa ary afaka manaparitaka angovo matetika amin'ny radio ary, raha tsy apetraka sy ampiasaina mifanaraka amin'ny torolàlana, dia mety hiteraka fanelingelenana manimba ny fifandraisana amin'ny radio. Na izany aza, tsy misy antoka azo antoka fa tsy hitranga ny fanelingelenana amin'ny fametrahana azy manokana. Raha toa ka miteraka fanelingelenana manimba amin'ny fandraisana radio na fahitalavitra io fitaovana io, izay azo faritana amin'ny famonoana sy ny famonoana ireo fitaovana, entanina ny mpampiasa hanandrana manitsy ny fitsabahana amin'ny iray amin'ireto fepetra manaraka ireto:
- Manovaova na mamindra ny antena mandray.
- Ampitomboy ny fisarahana eo amin'ny fitaovana sy ny mpandray.
- Ampifandraiso amina outlet ny fitaovana ao anaty faritra tsy mitovy amin'izay ampifandraisin'ny mpandray.
- Miresaha fanampiana amin'ny mpivarotra na teknisiana radio / TV za-draharaha.
Tandremo FCC: Ny fanovana na fanovana tsy neken'ny antoko tompon'andraikitra amin'ny fanarahan-dalàna dia afaka manafoana ny fahefan'ny mpampiasa hampiasana ity fitaovana ity. Ity mpampita ity dia tsy tokony hiara-miasa na miasa miaraka amin'ny antena na mpampita hafa. Ny fiasan'ny tarika 5.15-5.25GHz dia voafetra amin'ny fampiasana anatiny ihany.
Fanambarana momba ny taratra:
Ity fitaovana ity dia mifanaraka amin'ny fetran'ny fitrandrahana taratra FCC voatondro ho an'ny tontolo tsy voafehy. Ity fitaovana ity dia tokony hapetraka ary ampiasaina amin'ny halavirana farafahakeliny 22cm eo anelanelan'ny radiator sy ny vatanao.
Fanamarihana: ny safidin'ny kaody firenena dia natao ho an'ny maodely tsy an'ny US ihany ary tsy misy amin'ny maodely amerikana rehetra. Isaky ny lalàna mifehy ny FCC, ny vokatra WiFi rehetra amidy any Etazonia dia tsy maintsy apetaka amin'ny fantsona fiasan'i Etazonia fotsiny.
Fanambarana indostrialy Canada:
Ity fitaovana ity dia mifanaraka amin'ny RSS-210 ao amin'ny Industrial Canada Rules. Ny fiasa dia iharan'ireto fepetra roa manaraka ireto: (1) Ity fitaovana ity dia mety tsy hiteraka fanelingelenana manimba, ary (2) ity fitaovana ity dia tsy maintsy manaiky ny fanelingelenana voaray, ao anatin'izany ny fanelingelenana mety hiteraka fiasa tsy tiana.
(i) ny fitaovana ampiasaina amin'ny fantsom-pifandraisana 5150-5250 MHz dia tsy ampiasaina afa-tsy amin'ny trano mba hampihenana ny mety hisian'ny fitsabahana manimba amin'ny rafitra zanabolana finday miara-miasa;
(ii) atokana ho an'ny mpampiasa voalohany (izany hoe mpampiasa laharam-pahamehana) amin'ny tarika 5250-5350 MHz sy 5650- 5850 MHz ireo radara mahery ary ireo radara ireo dia mety hiteraka fanelingelenana sy / na fanimbana ireo fitaovana LE-LAN.
Ity fitaovana ity dia mifanaraka amin'ny fetran'ny fipoahan'ny taratra IC atokana ho an'ny tontolo tsy voafehy. izany
ny fitaovana dia tokony hapetraka ary ampiasaina amin'ny halavirana farany 27cm eo anelanelan'ny radiator sy ny vatanao.
Fanontaniana momba ny Linksys RE6300 / RE6400? Alefaso amin'ny hevitra!
Sintomy ny Linksys RE6300 / RE6400 Manual [PDF]
Linksys RE6300 / RE6400 Torolàlana ho an'ny mpampiasa User Guide RE6300 / RE6400 Fampidirana Ity Torolàlana ho an'ny mpampiasa ity dia afaka manampy anao ...
Linksys RE6300, Torolàlana momba ny fananganana RE6400 / Boky torolàlana ho an'ny mpampiasa LINKSYS User Guide RE6300 / RE6400 Fampidirana Ity Torolàlana ho an'ny mpampiasa ity dia afaka manampy ...
Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa Linksys Velop Linksys Velop User Manual - Mpampiasa PDF Linksys Velop voaatsara ...
LINKSYS CM3024 Manual Manual User Modem 24 × 8 LINKSYS CM3024 24 × 8 Manual Modem ho an'ny mpampiasa Cable mampiasa vola amin'ny ...
Linksys 16-Port / 24-Port Desktop Gigabit Switch Manual famaritana [LGS116, LGS124] Linksys Unmanaged Switches 16-Port Desktop Gigabit Switch (LGS116) 24-Port Gigabit ...
Posted byAdmin Febroary 21, 2019 Posted inLinksysTags: hanitatra, linksys, ny router
Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa SoundCore Liberty Air
Skullcandy Inkd + Manual Wireless Headphones
Manual Manual Detector Gas Multifunctional
Boky torolàlana ho an'ny mpampiasa fisehoana Colorimeter
Manual Manual mpow Neckband Wireless
CONCEPTRONIC Enclosure USB-C 3.1 Gen 2 Torolàlana ho an'ny mpampiasa
FARSEEING LED Studio light User Manual